IPhone itshixiwe yi-iCloud? Jonga apha! | IPhone iindaba
iPhone itshixiwe iCloud
Fumanisa ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud, into eya isanda ixhaphake kwiitheminali ezibiweyo okanye ezilahlekileyo kumnini wazo.
Ukusuka apha unokujonga ukuba ngaba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud ngaphambi kokuba uyithenge. Qaphela oko ukuba itshixiwe, awuyi kukwazi ukuyivula Gcwalisa le fomu ilandelayo kwaye ushiye amathandabuzo akho:
Nje ukuba kwenziwe intlawulo, uya kufumana i-imeyile eqinisekisa ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud okanye hayi. Imihla esikiweyo yokuthumela olu lwazi ihlala iyimizuzu emi-5 ukuya kweli-15, nangona iimeko ezithile zinokulibaziseka ukuya kwiiyure ezi-6.
Kwaye khumbula ukuba ukuba uyafuna, unakho jonga ukuba i-iPhone itshixiwe yi-IMEI ngokunqakraza kwikhonkco esikushiye nje.
1 Uyazi njani ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
2 Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud
3 Yintoni iCloud lock?
Uyazi njani ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
Kubalulekile ukuba thina Masiqinisekise ukuba isixhobo sitshixiwe nge-iCloud ngaphambi kokuba uyithenge, kuba ukuba ngempazamo uthenge isixhobo kwimvelaphi engekho mthethweni, uya kuthi ufumane isitshixo esikude esikuthintelayo ukuba ungasonwabeli.
Ke ngoko, sikunika inkonzo eya kukuvumela kwangoko jonga imeko yokutshixa nge-iCloud kwi-iPhone, Kuphela ngokugcwalisa idatha kwifom apho uyakufumana i-imeyile nengxelo yedatha eceliweyo malunga nemizuzu elishumi elinesihlanu (kwezinye iimeko ezithile inokulibaziseka ukuya kwiiyure ezi-6).
Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud
Sijongene nendlela enye yokuvula i-iPhone esele ibhlokiwe ngenkonzo ye-iCloud, kwaye oko kukungena kwi-iPhone ngokwayo, okanye kwiwebhusayithi ye-iCloud, zombini i-imeyile kunye negama eligqithisiweyo le-ID ye-Apple edityanisiweyo. kuyo, kwaye eya kusivumela ukuba siqinisekise isazisi.
Ngale ndlela, unako ukubuyisa ngokulula into evela kwi-iPhone ebikade itshixiwe ngaphambili nge-iCloud ngempazamo, okanye ukuba ibuyiselwe ezandleni zasekunene emva kwelahleko
Yintoni iCloud lock?
Ukutshixa nge-iCloud yinkqubo yokhuseleko Ukuba iApple ibizisebenzisa izixhobo zayo eziphathwayo oko kwafika i-iOS 7, ngale ndlela abanini be-iPhone elahlekileyo, ebekwe endaweni engeyiyo okanye ebiwe ngokungekho mthethweni, baya kuba nakho ukuyivimba ngokuqhagamshela kwi-intanethi, ngenjongo ayinako ukuwela ezandleni zabanye.
Nokuba ithini na le nto, xa isixhobo sivalekile kwifayile ye- Iakhawunti ye-iCloud, ukubanako ukufikelela kuyo emva kokubuyiselwa kuthintelwe, kuba inkqubo yokuqinisekisa iqalile ngeeseva ze-Apple eziza kujonga ukuba ibhlokiwe okanye hayi.